ကိုယ်ဘာကောင် လည်း ကိုယ့်ဖာသာ သေချာသိရင် ထိုင်သာနေ လိုက်ပါ – Na Pann San
Na Pann San W | August 9, 2020 | Knowledge | No Comments
စစ်ခွေးတွေနဲ့ ချီတာကျားသစ် ကို ယှဉ်ပြိုင်ပြေးခိုင်းပြီး ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ အချိန် ကို နှိုင်းယှဉ်တွက်ယူ မယ့် စမ်းသပ်မှုတခုပါဘဲ။
တာစလွှတ်လိုက်ထဲက ခွေးတွေဟာ သူ့ထက်ငါ အလျှင်အမြန်ပြေးကြပေ မဲ့ ချီတာ ကျားသစ် က ထတောင် မရပ်ပါဘူး။ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် နဲ့ အေးဆေးထိုင်နေတာ ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ အထိပါ ပဲတဲ့..။
(ချီတာကျားသစ် ) ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပြေးအမြန်ဆုံးသတ္တဝါ တစ်ကောင် ဆိုတာ လူတိုင်း သိသလို သူ့ကိုယ် သူလည်း သိတယ်ထင် ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲမှာ သူ့စွမ်းရည်မပြပဲ အေးဆေးထိုင်ကြည့်နေ ပါတယ်။ ဒီလိုပါဘဲ ဘဝ မှာ သိပ်အာရုံနောက် မခံပါနဲ့…
ကိုယ်ဘာကောင် လည်း ကိုယ့်ဖာသာ သေချာ သိရင် တချို့အရာတွေ မှာ ထိုင်သာနေလိုက် ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောချင်ရာပြောကြ ပါစေလေ။ သင်သိပ်တော် သိပ်တတ်နေရင်တောင် မလိုအပ်ရင် ထိုင်သာနေ ပါ။
ပြောချင်တာ ပြောကြ ပါစေ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သိပါတယ်.. ခွေးက.. ခွေး.. ကျားသစ် က.. ကျားသစ်.. ဆိုတာကို ။ ဒါပါဘဲ.. ဒါလေးပါဘဲ တချို့အရာတွေ ထိုင်သာကြည့်နေလိုက် ပါ အမောမခံ ပါနဲ့ ။
“Sit down if you do not need to do”
The image below showsastudy from 1961 when Americans conductedastudy of how much war dogs could compete withaleopard.
This is an experiment that compares the time with the war dogs and the leopard to compare the time of the goal. The strange thing was that the dogs in the launcher ran faster than me, but the cheetah did not even stand up.
The cheetah is one of the fastest running animals in the world. As everyone knows, I think he knows himself. In this race, he sits quietly and does not show skill.
In this way, in life, do not pay too much attention. If you know for sure what you are, just sit down and say something. Even if you knowalot, just sit back and talk about what you don’t need.
People around me know thatadog isadog,aleopard isaleopard. Just sit there and watch some things. Do not be discouraged.
အောကျမှာ ပါ တဲ့ ပုံဟာ.. ၁၉၆၁ ခုနှဈလောကျ တုနျးက အမရေိကနျတှေ ဟာ သူတို့ စဈခှေးတှေ ရဲ့ အပွေးစှမျးရညျ ကို ခြီတာ ကြားသဈ နဲ့ ပွိုငျရငျ ဘယျလောကျကှာမ လညျး လလေ့ာမှု တရ ပျကို လုပျခဲ့စဉျက ပုံလို့ စာထဲ ဖတျဖူး ပါတယျ။
ကိုယျဘာကောငျ လညျး ကိုယျ့ဖာသာ သခြောသိရငျ ထိုငျသာနေ လိုကျပါ
စဈခှေးတှနေဲ့ ခြီတာကြားသဈ ကို ယှဉျပွိုငျပွေးခိုငျးပွီး ပနျးတိုငျရောကျတဲ့ အခြိနျ ကို နှိုငျးယှဉျတှကျယူ မယျ့ စမျးသပျမှုတခုပါဘဲ။
တာစလှတျလိုကျထဲက ခှေးတှဟော သူ့ထကျငါ အလြှငျအမွနျပွေးကွပေ မဲ့ ခြီတာ ကြားသဈ က ထတောငျ မရပျပါဘူး။ ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့ နဲ့ အေးဆေးထိုငျနတော ပနျးတိုငျရောကျတဲ့ အထိပါ ပဲတဲ့..။
(ခြီတာကြားသဈ ) ဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အပွေးအမွနျဆုံးသတ်တဝါ တဈကောငျ ဆိုတာ လူတိုငျး သိသလို သူ့ကိုယျ သူလညျး သိတယျထငျ ပါတယျ။ ပွိုငျပှဲမှာ သူ့စှမျးရညျမပွပဲ အေးဆေးထိုငျကွညျ့နေ ပါတယျ။ ဒီလိုပါဘဲ ဘဝ မှာ သိပျအာရုံနောကျ မခံပါနဲ့…
ကိုယျဘာကောငျ လညျး ကိုယျ့ဖာသာ သခြော သိရငျ တခြို့အရာတှေ မှာ ထိုငျသာနလေိုကျ ပါ။ ပတျဝနျးကငျြက ပွောခငျြရာပွောကွ ပါစလေေ။ သငျသိပျတျော သိပျတတျနရေငျတောငျ မလိုအပျရငျ ထိုငျသာနေ ပါ။
ပွောခငျြတာ ပွောကွ ပါစေ။ ပတျဝနျးကငျြကလညျး သိပါတယျ.. ခှေးက.. ခှေး.. ကြားသဈ က.. ကြားသဈ.. ဆိုတာကို ။ ဒါပါဘဲ.. ဒါလေးပါဘဲ တခြို့အရာတှေ ထိုငျသာကွညျ့နလေိုကျ ပါ အမောမခံ ပါနဲ့။
ကောလဟာ လ ကြောင့် ပြည်မပျက်ပါစေ နဲ့
အခုခေတ်မှာ ကွက်တိမှန်နေတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့ အတိတ်တဘောင်တွေ …ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ…
အချိန် (၁) မိနစ်ပေးပြီး ဒီဆောင်းပါးလေး ကို ဖတ်ကြည့် ပါ “” ဦးဖိုးကျားလို ၀န်ကြီး များများပေါ် ပါစေ.. ” “